I-Luxury 1 -Igumbi lokulala le-House Villa eBase of Mount Abu
Akra Bhatta, Rajasthan, i-India
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Parool
I-Luxury 1-bedroom House Villa enhliziyweni yeRajasthan okuwukuphela kwayo I-Hill Station yaseMount Abu kanye netshe eliyigugu le-Rajasthan elinokwehlukahlukana kwe-Flora Fauna namasiko. Ngokungangabazeki, isimo sezulu kanye nemibono yikona okukhanga kakhulu eMount Abu. Uma indawo nesabelomali siphezulu ohlwini lwakho "IKHAYA LOKUTHULA OKUMNANDI" kutholakala kalula eNtabeni i-Abu kanye nesisekelo esikahle sokuhlola ubuhle be-Aravalli Range nakho konke okudingayo ukuze ujabulele iholide lomndeni.
I-Sweet Silence Home iyikhaya lesabelomali esingcono kakhulu Hlala e-Abu nge-ambiance enhle namakamelo avulekile. Amakamelo abekwe kahle, makhulu futhi anomoya okunikeza ukuphumula nokunethezeka ngemva kohambo lwakho lwansuku zonke. Ifakwe zonke izinsiza zesimanje eziyisisekelo. Iphinde ixhunywe nge-balcony yangasese. Ithala eliyimfihlo elingaphakathi kanye ne-Open Roof Terrace inikeza umbono omusha wendawo ezungezile. Indawo yethu ekahle yokuphumula nokuphumula ngemva kosuku olujabulisayo.
Indawo yokungena enhle enengadi yotshani iyindawo ekahle yokungena yendlu emangalisayo. Igumbi livulekile futhi lihlotshiswe kahle. Indlu ifakwe zonke izinsiza eziyisisekelo. Indawo yokuhlala engadini ukuze uphumule futhi lapho ungathola khona ukudla kwakho nozakwenu. Kunegumbi lokwamukela izivakashi eli-1 ezansi elihlotshiswe sezingeni eliphezulu kakhulu kanye nendawo yokudlela evulekile engaphandle evulekile ukuze ujabulise ulwazi lwakho.
I-Sweet Silence Home ebanzi futhi ehlukanisiwe ihlinzeka ngenhlanganisela enhle kakhulu yekhaya elifudumele elifudumele, elamukelayo elinokuthinta kancane okunethezeka okuhlanganisa imidlalo yangasese noma igumbi lokuzijabulisa (i-carrom, i-chess, imidlalo yebhodi, njll.) kanye negumbi lokuhlala elilodwa. Amakamelo akhethwe kahle ngefenisha ecebile, nenhle, enezinkuni, ingilazi, namathoni emvelo emvelo. Leli yithuba lokuzwa ijubane lempilo elihluke ngempela emaphandleni anokuthula. Icashile futhi inhle, le villa ebanzi, evalekile inikezela nge-balcony enomjiko endaweni enhle kakhulu ukuze uzihlole wena kanye nemvelo ezungezile ngezinhlobonhlobo zayo ezihehayo.
Ifulethi lihlinzekwa nge-Broadband WiFi yamahhala ne-TV. Indawo yamahhala yokupaka ngaphandle komgwaqo evikelekile ngaphakathi kwesakhiwo se-villa. Asikhokhisi imali eyengeziwe yokuhlanza ukuze sigcine amanani ethu encintisana futhi ethengeka. Njengembuyiselo, sithemba ukuthi izivakashi zingagcina indawo isesimweni esihlanzekile futhi sicocekile ngaphambi kokuthi uhambe, futhi zisebenzise okokulala namathawula kuphela njengoba ukudinga. Kwenziwe yonke imizamo yokuqinisekisa ukuthi izihambeli zithola izindawo ezingcono kakhulu zesimanje kule ndlela yokubalekela epholile.
 Igumbi lokulala elingu-1 ne-1WC's
 Indawo iza iphelele, i-TV enamashaneli asethelayithi kanye nevulandi yangasese.
 Amanzi Ashisayo Ayatholakala ezindlini zokugezela
 Ilineni elisha kanye nethawula elihlinzekwa ngezinto ezibalulekile zokugeza
 Wonke amalineni okuhlanganisa namathawula okugeza ahlinzekwa ukuze uhlale emalini yakho
 Ingubo yomuntu siqu yekamelo ngalinye
 Indawo eyodwa Evamile enemidlalo yasendlini enikezwe njengengxenye yokunikezwa kokuzijabulisa
 Le ndawo inezisebenzi ezihlala ngaphakathi kwezakhiwo, ezingaletha noma yini ongayidinga ngesikhathi uhlala evilla ukuze uthole ezinye izindleko.
 Indlu ayitholi isevisi ngesikhathi uhlala
 Ibhulakufesi liphinde lifakwe kuleli phakheji ngohlangothi lwabasingathi kanti ukudla kwasemini kanye neDinner kuzokhokhiswa ngokwehlukana futhi lokho nakho nge-oda langaphambilini.
 Izivakashi ezingaphezu kuka-2 zingahlaliswa ngesicelo ngezindleko ezihlukene zomatilasi ngamunye.
Indawo yokudlela ihlelwa ngokuyinhloko endaweni evulekile.
Izivakashi zingasebenzisa izinketho zokudlela ezabiwe Umsingathi noma zinga-oda ukudla ezindaweni zokudlela eziseduze kumamenyu atholakalayo emakamelweni.
Noma iziphi iziphuzo ezi-odwe ekamelweni zizokhokhiswa ngokungeziwe.
Iziphuzo ezengeziwe noma ukudla oku-odwe ngesikhathi sasekuseni kuzokhokhiswa ngokuhlukile.
I-Complimentary fixed Veg Breakfast ifakiwe ekuqashweni kwabantu abangu-2 kumuntu owengeziwe kuzonikezwa izindleko ezengeziwe.
Sitholakala endaweni enokuthula nengavamile. Uma ufuna indawo yokucasha ekahle emathangeni emvelo lena yindawo efanelekile ongaba kuyo.
Ukuze kube lula kuzihambeli uma zifika ngaphambi kwesikhathi noma zihamba sekwephuzile
Izinsiza ezinezindleko ezengeziwe
* Umshini ongenisa umoya
* Umshini wokuwasha
* Izidingo ezikhethekile zokudla
* Isikhungo seBonFire kuTerrace
Impela Cha Ngaphakathi Kwamagceke
 AYIKHO IQEMBU elivunyelwe
 AKUVUMELEKILE UTSHWALA
 AKUKHO UKUBHEMA okuvunyelwe
 AYIKHO Izilwane ezifuywayo ezivunyelwe
 AYIKHO IMITHI evunyelwe
 AKUKHO UKUDLA OKUNGEKHO KWE-VEG okuvunyelwe
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-6 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Leli khaya eliklanywe kahle elingaphakathi elizinze eduze kwesisekelo seNtaba i-Abu okungukuthi i-Akrabhatta iwubuhle besimanjemanje obunohlelo oluvulekile olumangalisayo lwempahla ethambile engathathi hlangothi, izitebhisi zemabula, iphansi lemabula, ingaphakathi elimangalisayo, nendawo yokudlela evulekile ehlukene. I-villa ethokomele enokubukwa okuhle okuvela kumafasitela ayo. Vuka ubone okuzolile futhi uphuze i-chai efudumele egcekeni elihle lalokhu kuhlala. Izindlu ezingaphakathi zakhelwe kahle ngakho-ke ungakhohlwa ukuthatha izithombe ezinhle zezikhathi ezifudumele ozichithwe nabantu obathandayo lapha ku-Instagram. Ngezidingo eziyisisekelo ezifakwe ngokugcwele, igumbi lokugezela le-en-suite likanokusho lijwayele ingadi encane yemvelo, imibhede yezimbali, indawo yokupaka izimoto, kanye nethala elingaphandle elinompheme wokuhlala kanye nojiko lwesimanje.
Ngingumuntu othanda ukuvakasha onesizinda sezakhiwo futhi ngigqugquzelwe isipiliyoni sami ngidale ikhaya eligcwele intokozo, elinamazinga aphezulu okuhlanzeka, eliyinkimbinkimbi, elinesitayela kodwa elithokomele. Ukusingatha abantu yinto engiyithandayo futhi ngiyathanda ukusabalalisa injabulo ngesipiliyoni engikuzuzile. Ngithobeke ngalo lonke uthando olukhonjiswe izivakashi kithi futhi umgomo wethu omkhulu uwukunikeza ulwazi ukuze wonke umuntu alukhumbule.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uthola ubumfihlo obugcwele kodwa angikholi ucingo uma udinga noma yiluphi usizo. Mina noma umnakekeli wami wasekhaya siyatholakala noma nini ngaphambi noma phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho futhi sizohamba imayela elingeziwe ukuze sikwenzele ukuhlala okhumbulekayo kuwe. Lapho ufika, umnakekeli wethu uzokwamukela futhi anikeze isingeniso esifushane mayelana nendawo futhi akuqondise nganoma yiziphi izidingo zakho phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho.
Ngingumuntu othanda ukuvakasha onesizinda sezakhiwo futhi ngigqugquzelwe isipiliyoni sami ngidale ikhaya eligcwele intokozo, elinamazinga aphezulu okuhlanzeka, eliyinkimbinkimbi, e…